नेतृत्व तह जिम्मेवार ढंगबाट चल्नु जरुरी छ « Sahakari Nepal
नेतृत्व तह जिम्मेवार ढंगबाट चल्नु जरुरी छ
प्रकाशित मिति : 28 December, 2015 5:46 am
अध्यक्ष–बहुउद्देश्यीय जिल्ला सहकारी संघ लि., सिन्धुपाल्चोक
१. सिन्धुपाल्चोकका सहकारीको लगानीको प्राथमिकता के छ ?
जिल्लाका सहकारीहरुले विषयगत उद्देश्य अनुसार लगानी गरिरहेको अवस्था छ । बचत, बहुउद्देश्यीय, कफी, दुग्ध, कृषि सहकारीहरु क्रियाशिल छन् । शेयर सदस्यहरुलाई कसरी सहकारी सम्बन्धी शिक्षा, तालिमबाट जागरुक बनाउन सकिन्छ त्यही हो र सदस्यहरुको व्यवसायिकतामा जोड ।
२. सहकारी क्षेत्रको बिकासका लागि संघले के गर्दै छ ?
मुख्यत तालिम नै हो । सहकारी अगाडी बढाउन चाहिने दक्षता अभिबृद्धि गर्न हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ लागि परेको छ । संघमा आवद्ध सहकारीहरुलाई समय सापेक्ष के गर्न सकिन्छ त्यसमा लागिपरेको छ । आबद्ध नभएका बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई पनि संघमा ल्याउने योजना छ ।
३. सहकारी पैसा किनबेचमा मात्र केन्द्रित भए भन्ने छ नि, सहकारीलाई कसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ ?
देशमा सबै विषयगत गरेर ३० हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्था क्रियाशिल छन् । बचत तथा ऋण सहकारीलेमात्र यस्तोको मात्र कारोबार गर्ने हुन् । अन्य विषयगत सहकारीले पैसाको सँगसँगै अन्य क्षेत्रमा काम गरी अमूल्य योगदान दिएको अवस्था छ । सहकारी संस्थाहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको अवस्था छ । जस्तो हाईड्रोपावर, व्यवसायिक कृषि, दुग्ध लगानीका क्षेत्रमा सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार आफूलाई समर्पित गरको अवस्था छ । यसले राष्ट्रमा दिएको योगदान धेरै महत्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
४ सहकारीको विकासका लागि सहकारी नीति ऐन, नियम किन बन्न सकिरहेका छैनन्, तपाई काठमाडौंसँग पनि पहुँच राख्नुहुन्छ, कसरी बुझ्नुभएको छ ?
सहकारी नीति, ऐन, नियम नबनेको होइन, समक्ष सापेक्ष परिमार्जन गर्ने अवस्थामा छ । त्यो संसोधनका लागि अगाडी बढेको अवस्था छ । त्यसमा सरोकार राख्ने सहकारीका सहकारी कर्मी, अगुवा, बुद्विजीवी,तथा नीति निर्माण तहमा रहेकाहरुले राजनीतिभन्दा माथी उठेर सहकारीलाई दीर्घकालसम्म अगाडी लैजानसक्ने नीति, नियम तथा ऐन बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ ।
५ सहकारीको विकासका लागि अभियानको भूमिका कत्तिको प्रभावकारी भएको पाउनुभएको छ ?
सहकारीको विकासका लागि अभियानको भूमिका प्रभावकारी नै भएको मैले पाएको छु । यसमा राष्ट्रिय सहकारी संघको भूमिका महत्वपूर्ण छ । देशमा भएका सबै जिल्लाका संघहरुलाई समय सापेक्ष अगाडी बढाउन चाहिने योजनाहरु, नीति नियमहरु, सहकारीको मूल्य मान्यता अनुरुप हिंडाउन चाहिने ऐन बनाउन उसको नेतृत्व सशक्त हुनु जरुरी छ । उसले खेल्ने भूमिकाले नै सहकारी अभियान कहाँ पुग्छ त्यसमा भर पर्छ । नेतृत्व तह जिम्मेवार ढंगबाट चल्नु जरुरी छ त्यसमा अन्य विषयगत केन्द्रीय संघ, जिल्ला संघ र विषयगत जिल्ला संघहरुलाई सहकारी अभियानमा हातेमालो गरी राष्ट्रिय सहकारी संघले सँगसँगै लिएर राय, सुझाव र समयको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी अगाडी बढेको खण्डमा अभियानले सार्थकता पाउँछ । साथै राजनीतिक आस्था भन्दा माथि उठी राष्ट्रिय सहकारी संघ, विषयगत केन्द्रीय संघ र जिल्ला संघका नेतृत्व वर्गले भूमिका खेलेको अवस्थामा सहकारी अभियानले सार्थकता पाउँदछ भन्ने मेरो बिचार छ ।